Iibso DIY Magnetic Dhismayaasha Dhismayaasha Alaabada Carruurta - Rar Bilaash ah & Canshuur La'aan | WoopShop®
DIY Magnetic Building Blocks Alaabta Carruurta
dib u eegista 60
$ 81.99 qiimaha joogtada ah $ 87.99
Color 150 PCS-2 150 PCS-1 150 kumbiyuutarada 180 PCS-2 180 PCS-1 124 PCS-1 124 kumbiyuutarada 62 PCS iyo 80 Card 180 kumbiyuutarada 50 kumbiyuutarada 68 kumbiyuutarada 36 kumbiyuutarada 113 kumbiyuutarada 88 kumbiyuutarada 100 PCS-2 100 PCS-1 100 kumbiyuutarada 21 PCS-1 21 kumbiyuutarada
maraakiibta From SPAIN Belgium CN Poland
150 PCS-2 / SPAIN 150 PCS-1 / Belgium 150 PCS / CN 180 PCS-2 / SPAIN 180 PCS-1 / Belgium 124 PCS-1 / Belgium 124 PCS / CN 62 PCS iyo 80 Card / CN 180 PCS / CN 50 PCS / CN 68 PCS / CN 36 PCS / CN 113 PCS / CN 88 PCS / CN 100 PCS-2 / Poland 100 PCS-1 / Belgium 100 PCS / CN 21 PCS-1 / CN 21 PCS / CN
DIY Magnetic Building Blocks Alaabta Carruurta - 150 PCS-2 / SPAIN gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Waxyaabaha: Caaga, Magnet
Nambarka Tusaalaha: 40021
Da'da Da'da: 4-6y, 7-9Y, 10-12Y, 13-14Y,> 14Y
Sifooyinka: Alaabada lagu ciyaaro ee waxbarashada, Alaabada lagu ciyaaro ee iftiinka ah, DIY Magnetic Blocks Blocks
Cabbirka: Baaxadda Weyn ee dhismayaasha birlabta (Way ka badbaado badnaan doontaa Carruurta)
Xidhmada: Bacda PE (Buugga Ingiriisiga oo Bilaash ah)
Midabka: Waxaa loo diri doonaa si kadis ah
Iyadoo ku saleysan qiimeynta 60
Sanduuqa ayaa inyar la taabtay kuuskuusyo. Maadadu waxay umuuqataa mid isku celcelis tayo leh laakiin qiimaheeda waa mid aad ufiican oo buuxiya shaqadiisa. Mahadsanid
Si dhakhso leh, u raad raadin la socota farriinta guriga: Ruushka Post EMS In Novosibirsk yimid 10 maalmood, waxaa lagu soo buuxiyay dhowr lakab oo popirka ah, taas oo aan ka badbaadin weelka la naqshadeeye ka gows, laakiin uma maleynayo in ay ahayd dhibaato weyn oo weyn Naqshadeeye waa wanaagsan yahay, magnets caadi ah, xidhmo dhan kaararka leh xulashooyinka suurtagalka ah, weelku runtii wuu yar yahay, caaggu waa khafiif yahay, laakiin guud ahaan, qabow.
Runtii sare waxaan kugula talinayaa bilaa shaki. Waxaan ku helay sanduuq caag ah oo heer sare ah oo ku habboon kaydinta iyo sanduuq aad u dhammaystiran wiilkaygu wuu jeclaan doonaa 4-ta sano.
Wax soo saarka weyn wuxuu umuuqdaa mid iska caabin ah. Qunsuliyadaha ayaa kaxun in aysan jirin qaybo laba jibbaaran oo kufilan dhamaan moodooyinka. Sanduuqa ayaa yimid goose yar laakiin haddii kale carruurtu way jecel yihiin. Midabada waa sare. Waad ku mahadsan tahay xawaaraha bixinta!
Baloogyadu waa tayo aad u wanaagsan sidaa darteed midabbada quruxda badan carruurtaydu way ku qanacsan yihiin wayna faraxsan yihiin wax dhaawac ah ma jiraan 3aad illaa iyo inta dhismeyaal dhismo ah aad ayaan ugu taliyay